QacQoc GN30H USB C adapter တစ်ခု၊ ငါက Mac ပါ
QacQoc GN30H USB C adapter တစ်ခု၊
MacBook Pro (သို့) Apple Laptop ကို ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေရင် USB-C adapter နဲ့အတူပြီးသွားပြီ။ ၎င်းသည် 8-in-1 Hub ဖြစ်သည်။ MacBook Pro သည် desktop ကွန်ပျူတာဖြစ်လာပြီးချိတ်ဆက်မှုကိုခံစားနိုင်သည် 4K resolution ဖြင့်ကြည့်လျှင်ပင် monitor နှင့်လျော့နည်းသည်။
ဤသည် QacQoc GN30H Hub ဖြစ်သည်၊ သင်လက်ဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်နောက်ထပ် ports အားလုံးကိုထည့်ပေးမည့် adapter ဖြစ်သည်။ အကယ်လို့သင်ဟာ MacBook Pro ကိုဝယ်မယ်၊
သင်၏ MacBook Pro အတွက် ၆၃ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိပြီး ၁၀.၅ x ၄.၉ x ၁.၄ စင်တီမီတာရှိသည့် USB-C adapter ကိုလိုချင်ပါကသင်၏အခွင့်အရေးသည် ပူးတွဲပါပုံများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းတွင် USB port သုံးခုရှိပြီးနှစ်ခုအနက်မှ ၂.၀ နှင့်တတိယမှာ USB 63 မြန်နှုန်းမြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နှစ်ဖက်၏တ ဦး တည်းတွင်ရှိပါတယ် adapter နှင့် MacBook နှင့် network ethernet connector နှစ်ခုလုံးအတွက် USB-C input တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် MacBook ရှိ USB-C port များထဲမှတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်မည့် USB-C cable ရှိသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတွင် SD နှင့် micro SD ကဒ်အထိုင်များရှိသည် အခြား USB port သုံးခုနှင့် HDMI 4K output တို့ပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည်အန်ဒွိုက်ပြုလုပ်ထားသောအလူမီနီယမ်နှင့်အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုသင်ပိုမိုသိလိုပါကသို့မဟုတ်သင့်အားမှာကြားလိုပါကသင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဒီလိပ်စာကိုသွားပါ သင်အတွက်ဝယ်နိုင် 65,99 ယူရို.
အမျိုးအစား -C သဟဇာတပစ္စည်းများ
data transfer နှင့် power supply ကိုထောက်ပံ့သည်။
Macbook Pro ကို 2016/2017
၁။ USB flash drives ပေါင်းများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းထောက်ပံ့သည်၊ သို့သော်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ပမာဏကြောင့်လက်ရှိပြင်ပ hard drive တစ်ခုသာရှိသည်။
၂။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း Hub သည်အပူလာသည်။ အဆိုပါပြင်းအား၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2is ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။
3. အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာအချက်အချာဆက်သွယ်ထားသောကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ပါက WLAN နှင့် Bluetooth အကွာအဝေးတွင်အနှောင့်အယှက်များဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook Pro » QacQoc GN30H USB C adapter တစ်ခု၊
နိုင်ငံသား Juca ဟုသူကပြောသည်
Citizen Juca အားပြန်ကြားပါ
Lexus sedan တွင် Apple CarPlay ရှိပြီး၎င်း၏ ၁၂.၁ "မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသည်